कतार प्रहरीमा नेपाली लैजाने प्रक्रिया स्थगित किन ? खुल्यो कारण सहित « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कतार प्रहरीमा नेपाली लैजाने प्रक्रिया स्थगित किन ? खुल्यो कारण सहित
काठमाडौँ। कतारले १० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । नेपाल र कतारी अधिकारीबीच भर्ना प्रक्रियाको विषयमा सहमति नजुटेपछि कतारले तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो ।